CAYAARAHA DIBADA | Bakool.net
Home / CAYAARAHA DIBADA
Xiriirka kubadda cagta qaarada yurub ee markii lasoo gaabiyo loo yaqaano UEFA ayaa ku ganaaxay laacibka kooxda kubadda cagta Juventus aflagaadadii uu u geystay taageerayaasha kooxda Atlatico Madrid. Ronaldo oo sadaxley dhaliyay kulankii ka dhacay magaalada Torino ayaa lagu soo eedeeyay inuu jamaahiirta Atlatico Madrid u geystay aflagaado kadib markii kooxdiisa Juventus usoo baxday wareega 8aad ee tartanka UCL. Hadaba ...
Xulka kubadda cagta Catalonia ayaa la filayaa inay la ciyaarraan kullan xulka qaranka dalka Venezuela bishan March 25-keeda, inkastoo kooxo dhowr ah ay u diideen xiddigahooda inay ka mid noqdaan safka Catalonia, sidaas oo ay tahayna waxaa u ciyaarri doona xiddigo waaweyn. Real Valladolid, Huesca iyo Rayo Vallecano ayaa dhammaantood u diiday xiddigahooda inay matalaan xulka Catalonia ee uu hooggaamiyo ...
Mustaqbalka laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qeyb ka ah su’aalaha ugu waaweyn ee horyaalo kooxda Barcelona xagaagan markuu dib u furmo suuqa kala iibsiga cayaartooyda. Wabsetka caalamiga ah ee Goal oo soo xiganaya wargeysyo Spain kasoo baxa ayaa sheegay in Barcelona ay suuqa kala iibsiga soo dhigi doonto laacibkeeda Phillippe Coutinho iyadoona kooxdii rabto ay ku heli karto qiimo ...
Wax ka ogaaw 10-ka cayaaryahan ee u istaageen taageerayaal aan kooxdooda ahayn bandhig heer sare ay sameeyeen awgeed
Lionel Messi ayaa todobaadkan sedexleey ka dhaliyay kooxda Real Betis kulan ka tirsanaa La Liga oo ay Barcelona 4-1 guusha ku qaadatay sidoo kalena Leo waxaa u istaageen taageerayaasha kooxda Betis ee garoonka Benito Villamarin usoo daawasho tageen. Haddaba shabakada Marca waxaan kasoo xiganay 10-cayaaryahan oo ay dhacday inay u istaageen taageerayaal aan kooxdooda ahayn bandhig heer sare ay sameeyeen awgeed: Maradona: Real ...
Wararkii ugu dambeeyay kooxaha EPL ee Big Six halkaan kaga bogo
Liverpool ayaa quus ka taagan helitaanka Timo Werner madaama Bayern Munich hormar ka sameeneyso sidii ay weeraryahankan xagaagan RB Leipzig kaga soo qaadan laheyd. Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in Paul Pogba noqon karo laacibka khadka dhexe caalamka ugu wanaagsan madaama uu siweyn u hormariyay kubadiisa dhanka dhalinta goolasha, caawinta, raacashada iyo kartida hogaaminta kooxda. Maamulka Chelsea ayaa dhaliil xoogan usoo jeediyeen bandhiga cayaartooyda kooxda sameenayaan sidoo kalena ...
Rasmi: Isku aadka Nus Dhamaadka (Semi Final) FA Cup oo la sameeyay
Waxaa si rasmi ah loo sameeyay isku aadka nus dhamaadka ama Semi Final-ka FA Cup ayadoo afar naadi kaliya isku soo hareen. Marka hore aan idin xasuusino kooxaha wareega 8-aad kasoo gudbeen iyo natiijooyinka ay heleen kulamadii Sabti iyo Axad la cayaaray: Watford 2-1 Crystal Palace Swansea City 2-3 Man City Wolves 2-1 Man United Milwall 2-2 Brighton (4-5 rigoorayaal ...
Everton oo Guuldaro Xanuun Badan Dhabarka u Saarisay Kooxda Chelsea oo Marti ugu aheyd Goodison Park.
Kooxda kubadda cagta Everton ayaa guuldaro xanuun badan dhabarka u saarisay kooxda Chelsea taasoo awoodi weysay iney ka faaideysato kulanka baaqiga u ahaa isla markaasna kaalinta 5aad kala baxdo kooxda Manchester United. Qeybtii hore cayaarta inkastoo aanan wax goolal la iska dhalinin hadana Chelsea ayaa aheyd ooxda jaanisyada ugu badan abuurtay iyadoo Eden Hazard uu qarka u fuulay inuu kooxdiisa ...
Liverpool oo Guul Muhiim ah ka Gaartay Kooxda Fulham isla Markaasna Hogaanka Horyaalka si kumeel Gaar ah ula Wareegtay.
Kooxda kubadda cagta Liverpool oo loolan ba’an kula jirtay tartanka Horyaalka Kooxda Manchester City ayaa guul weyn misna aad ugu muhiim ah ka gaartay kooxda qarka u saaran iney u laabato heerka labaad ee Fulham. Liverpool oo kulamadii ugu dambeeyay ee ku cayaartay meel aan garoonkeeda aheyn aad ugu dhibtooneysay isla markaasna dhibco badan ku lumisay ayaa kulankaan dooneysay iney ...
Macalin Klopp oo ka dhawaajiyay in wax xidigo muhiim ah aysan ka tagi doonin kooxda sidii horay u dhici jirtay. Muxuuse ka yiri qorshihiisa mustaqbalka?
Macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka dhawaajiyay in xidigaha muhiimka u ah kooxda aysan meelna u socon isla markaasna kooxda ka tagi doonin sidii ay waayadii ugu dambeysay sameeyeen. Liverpool ayaa horay waxaa uga tagay xidigo muhiim u ahaa kooxda isla markaasna ahaa xidigo saameyn sare kooxda ku leh sida Xabi Alonso, Fernando Torres iyo Luis Sueraz ...
Sadio Mane oo ay macquul tahay inuu seego kulanka Fulham. Maxaa soo kordhay?
Laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa lagu soo waramayaa iney macquul tahay inuu seego kulanka muhiimka ah ee kooxdiisa la cayaari doonto kooxda Fulham wareega 31aad ee tartanka Horyaalka EPL. Mane oo kulamadii ugu dambeeyay si isdaba jog u cayaarayay sidoo kalana goolal muhiim ah kooxdiisa u dhalinayay ayaa haatan la sheegayaa inay macquul tahay inuu seego kulanka Bari kooxdiisa ...